Kooxda Arsenal oo afka ciidda loo daray - BBC News Somali
Kooxda Arsenal oo afka ciidda loo daray
Image caption Arsenal ayaa isu gayn lagaga badiyay 10 gool halka ay 2 gool ka keensadeen
Arsenal oo toban ciyaartooy ku dheelaysa ayaa laga reebay horyaalka Yurub ee Champions League oo ay ka gaareen wareegga 16ka, ka dib markii ay jab kala kulmeen qaybtii dambe ee ciyaartii ay la yeesheen kooxda Bayern Munich.
Go'aan dood la galiyay oo dhacay daqiiqadii 53aad ee ciyaarta ayaa baabi'iyay rajadii ay Arsenal ka qabtay in ay noqoto kooxdii u horaysay ee iska mogta afar gool oo Champions League lagaga dhaliyay is araggii koobaad, Arsenal ayaa is aragii koobaad ee Jermalka ka dhacayna lagaga adkaaday 5-1.
Arsenal ayaa hogaanka ku qabatay gool qurux badan oo uu dhaliyay Theo Walcott daqiiqaddii 20naad, ka hor inta aan Bayern loo dhigin rigoore sababay in ciyaarta laga saaro Laurent Koscielny oo difaaca Arsenal ka mid ah.
Garsoore Anastasios Sidiropoulos ayaa Laurent siiyay kaarka jaalaha ka dib markii uu khalad ka galay ciyaaryahan Robert Lewandowski balse kaarka guduudan ayuu ku daray markii ay u cadaatay in uusan dhanka kubadaba aadin markii uu khaladka galayay.
Tababaraha Arsenal, Arsene Wenger ayaa u muuqday in uu aad uga carooday isbadelka degdega ah ee uu qaatay garsoorahu.
Lewandowski ayaa gool u badalay rigoorahaas, iyadoo 17 daqiiqo gudahoodna ay Bayern dhalisay afar gool.
Ciyaartii ayaana sidaas ugu soo idlaatay 5-1 marka la isku daro labadii kulan ee ay wada yeesheenna waxay noqonaysaa in Arsenal lagaga badiyay 10 gool halka ay labada kulanba ka keensatay 2 gool oo kali ah.
Image caption Arturo Vida oo midig xiga ayaa u dabaaldagaya gooshii uu dhaliyay Arjen Robben qaybtii labaad ee ciyaarta